Daawo Video: Tababar la xidhiidha Barnaamij lagu kobcinayo dhaqaalaha Degmada Burco oo maanta lagu soo Gebogabeeyey Hotel Cigaal ee Magaalada Burco.(Hadhwanaagnews) Monday, July 09, 2012 Tababarkan oo ay maalgelinaysay Hayadda ILO ayaa soconayey muddoo saddex maalmood ah iyadoo ay ka qaybqaadanayeen Xubno kamid ah Dawllada hose ee Burco, sarakiil ka socotay laamaha Dawladda dhexe, xubno ka mid ah shirkadaha ganacsiga, qurbajooga gobolka Daawo Video: Tababar la xidhiidha Barnaamij lagu kobcinayo dhaqaalaha Degmada Burco oo maanta lagu soo Gebogabeeyey Hotel Cigaal ee Magaalada Burco.
Tababarkan oo ay maalgelinaysay Hayadda ILO ayaa soconayey muddoo saddex maalmood ah iyadoo ay ka qaybqaadanayeen Xubno kamid ah Dawllada hose ee Burco, sarakiil ka socotay laamaha Dawladda dhexe, xubno ka mid ah shirkadaha ganacsiga, qurbajooga gobolka iyo weliba xubno ka mid ah haweenka Degmada Burco.
Taababarkan oo loo bixiyey PPD oo macnaheedu yahay Mashruuca Horumarinta Degmada ee Ganacsatada iyo Dawllada ayaa si weyn loogu
qaadaa dhigay eyey isla markaasna lagaga doodayey sida ugu haboon ee kor loogu qaadi karo Dhaqaalaha Degmada shaqo Abuurisna loogu samayn karo Dhalinyarada iyo Bulshada Gobolkani.
Xubnihii Dooda ka qaybqaadanayey ayaa soo jeediyey in dhaqaalaha degmada la kordhin karo haddii cashuur dheeraad ah oo ka badan tan caadiga ah lagu soo Rogo Gaadiidka Raaxada iyo Bushaarooyinka ka ganacsada Dawooyinka haweenku isku qurxiyaan, iyago ku sababeeyey inaanay ahayn wax Bulshada oo dhan u wanaagsan ama ka dhexeeya amaba faaido u leh, halka qaar kalena ay ka soo jeediyeen in la sameeyo Guddiyo ay shaqaalaha Dawladaha hoose iyo Dawladaha dhexe samaysteen oo ka shaqeeya Arrimahaasi.
Lataliyaha Dawladda hoose ee Burco Muuse Cali Xirsi oo isagu Barnaamijkan xidhiidhinayey ayaa ka warramay Ujeedooyinka ugu waaweyn iyo faaidooyinka Tababarkani.
Gebogabadii Waxa Tababarkan Soo xidhay Maayarxigenka Degmada Burco Axmed Cabdi Fly oo sheegay in Tababarkani uu ahaa mid aad u muhiim ah isla markaasna ay ka faaideysteen , waxaanu aad ugu mahadnaqay Hayadda Mashruucan maalgelinaysay ee ILO.